တရုတ်တန်းမှာ အလုပ်စမ်းရှာ Chinatown | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » တရုတ်တန်းမှာ အလုပ်စမ်းရှာ Chinatown
တရုတ်တန်းမှာ အလုပ်စမ်းရှာ Chinatown
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Feb 26, 2011 in Community & Society, Cultures, Drama, Essays.., Jobs & Careers, My Dear Diary |5comments
နယူးယောက်မြို့ကို ရောက်လာကြတဲ့ နိုင်ငံတကာက ရွှေ့ပြောင်းလာသူ လူသစ်များ တရုတ်တန်းမှာ အလုပ်စရှာကြပုံကို ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ ကထဲက nytimes.com မှာတွေ့လို့အားရင် ဘာသာပြန်ပို့စ်တင်မယ်လို့ စိတ်ကူးရှိပေမဲ့ ကိုယ့်ဒေသလည်းဖြစ် ကိုယ်တိုင်သူတို့လို ဖြတ်သန်းခဲ့တာမို့ ကိုယ့်အာဘော်နဲ့ကိုယ်ရေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ မူရင်းဆောင်းပါးကိုဖတ်ချင်သူများအတွက် ဒီပို့စ်နဲ့တဆက်ထဲ တွဲတင်ထားပါတယ်။ သိပ်တော့အသေးစိတ် မရေးပါဘူး။ အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုး၊ ပြောသင့်တဲ့ တာမျိုးပဲ ပြောပါ့မယ်။ တချိန်မှာ ကိုယ်က အမေရိကန်သမတလောင်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာမို့ အကုန်လုံးထုတ်ပြောလို့ မဖြစ်ဘူးလေ။ သမတဖြစ်ခွင့် မရှိလည်း ဒုတိယသမတပေါ့ဗျာ။ (ပြီးမှသမတကို လူငှားပြီးလုပ်ကြံခိုင်းမယ်။) :D ပင်လယ်ရပ်ခြားမှာ ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုး ဘဝကို ဖြတ်သန်းရသူတိုင်းဟာ ဇာတ်လမ်းကိုယ်စီနဲ့ပါ။ ဝမ်းနဲစရာ၊ ခံပြင်းစရာ၊ စိတ်ပျက်စရာ၊ နောက်တော့လည်း ငယ်စဉ်က အချစ်ဟောင်းအကြောင်းလို ရယ်စရာ မောစရာ လွမ်းစရာတွေ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ ရယ်စရာနောက်မှာ မောစရာဆိုတာ ပါနေမှတော့ ပေးဆပ်မှု အတိုင်းအတာကို တွေးသာကြည့်ကြပါ။
အမေရိကားကို မလာခင် နယူးယောက်ကိုသွားတဲ့မြန်မာများ ယောက်ျားဆူရှီ မိန်းမ ကျောက်တန်း လို့ သိသူများက လက်ချာပေးလိုက်ပါတယ်။ အမှန်လဲ ကျားမ မရွေး မြန်မာတွေ ဆူရှီလိပ်ခြင်းနဲ့ မကင်းကြပါဘူး။ လူခံရှိပြီး စက်ရုံပေါတဲ့မြို့တွေကို ရောက်သွားရင်တော့ တမျိုးပေါ့လေ။ နို့မို့လို့ကတော့ စကားမတတ်၊ နယ်မြေ မကျွမ်းဆိုရင်တော့ ဆူရှီဆိုင်ဖွင့်နေသူ မြန်မာများထံမှာ live in နေပြီး ဆူရှီဝင်လိပ်ရပါတယ်။ နယူးရောက်မြို့လို နေရာမျိုးဆိုရင်တော့ အိမ်ခန်းဈေးကြီးလို့ ဆိုင်ရှင်က တာဝန်မယူပါ။ ဆူရှီအလုပ်ကိုတော့ မြန်မာများအချင်းချင်း တော့ကီပစ်ရှာလို့ ရပါတယ်။ မြန်မာတွေအဝင်များရင် အလုပ်ရှားပြီး သာမန်အတိုင်းကတော့ နေရာမရွေးရင် လွယ်ပါတယ်။ စိန်ကျောက်လက်ဝတ်ရတနာ လက်လီ လက်ကားရောင်းဝယ် ထုတ်လုပ်ရာ နယူးယောက်စီးတီး မန်ဟက်တန် ၄၇လမ်းက ကျောက်တန်းလို့ မြန်မာတွေခေါ်တဲ့ Dimond District မှာလုပ်ချင်ရင် ခက်ပါတယ်။ ဆူရှီလို မသိဘဲနဲ့ ဝင်တိုးလို့မလွယ်၊ အဆက်အသွယ်ရှိ၊ လည်လည်ဝယ်ဝယ်ရှိ၊ အင်္ဂုလိစကားကို ပြောရဲဆိုရဲမှ ဖြစ်တာပါ။ နေရာလွတ်ကလဲ သိပ်မများ၊ နယ်ကတက်လာသူ၊ ရောက်ပြီးသားလူတွေကလည်း ရုံးထဲမှာလုပ်ရတဲ့ အလုပ်မျိုး လိုချင်ကြတော့ ကံလိုက်မှ အဆက်အသွယ်ကောင်းမှ ရတတ်ပါတယ်။ ရောက်ခါစလူများ၊ လူခံမရှိသူ များကတော့ တရုတ်တန်း ပြေးရပါတယ်။
မူရင်းစာထဲပါတဲ့အတိုင်း အစကတော့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ဝင်လာကြတဲ့ တရုတ်လူမျိုးများအတွက် အောက်ခြေသိမ်း အလုပ်များကို (စားသောက်ဆိုင်၊ လောင်ဒရီ၊ စတိုးအကူ…) ပွဲခယူရှာပေးတာပါ။ နောက်တော့ လူမျိုးတရာ့တပါးနေတဲ့မြို့ ဖြစ်တာနဲ့အညီ လိုင်းပေါင်းစုံ မထသဖြစ်သွားပါတယ်။ ကျနော်လည်း သူများထက် ပိုထူးပြီး ဂျိုမပါခဲ့တာမို့ ရောက်ခါစဆူရှီလိပ်၊ နောက်တော့ တရုတ်တန်းအေဂျင်စီမှာ အလုပ်ရှာ၊ နေသားကျမှ ပိုကောင်းတဲ့အလုပ် ရှာရပါတယ်။ အလုပ်တွေအများစုက ကျောင်းတဖက်နဲ့လုပ်ဖို့ အဆင်မပြေတာများတယ်။ အလုပ်ရှင် သဘောကျအောင်ပေါင်းပြီး နောက်မကျောင်းချိန်နဲ့ညှိယူပေါ့။ စာထဲမှာပါတဲ့ Tina agency, Winner agency ဆိုတာ ဟိုးအရင်ထဲက ရှိပါတယ်။ နယူးယောက်မြို့မှာနေတဲ့ မြန်မာတွေဆိုရင် မသိသူခပ်ရှားရှားပါ။ အေဂျင်စီသွား၊ ဖောင်ဖြည့်၊ ပိုက်ဆံသွင်း၊ (ကျနော်တို့တုန်းက ၃၅ဒေါ်လာလား မမှတ်မိပါ)၊ ပြေစာလက်ခံနဲ့ ဝှိုက်ဘုတ်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ အလုပ်တွေကို ကိုယ်မှန်းတဲ့လုပ်ခ၊ အလုပ်အမျိုးအစားနဲ့ တိုက်မေးရပါတယ်။ တရုတ်မတွေကလည်း အင်္ဂလိပ် စကားပြောအစစ်မဟုတ်၊ ကိုယ်ကလည်း I go to school by bus လောက်ပဲ တတ်တာဆိုတော့ ခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့ ဟုတ်တော့ဟုတ်နေတာပါပဲ။ အဓိက က အဓိကပါပဲလေ။ အိုကေရင် အေဂျင်စီက အလုပ်ရှင်ဆီကိုဖုံးဆက်၊ အလုပ်ရှာသူကို သွားရမဲ့ အချိန်နဲ့လိပ်စာပေးပါတယ်။ ကျန်တာကတော့ အလုပ်ရှင်နဲ့ဘယ်လို အပေးအယူရှိလဲ မသိဘူး။ အလုပ်ရှာသူဖကပဲ ပွဲခယူတာတော့သိတယ်။ ပြဿနာဖြစ်ရင် ဘာတာဝန်မှ ခံပုံမရပါဘူး။ အလုပ်သမားဌာနကလည်း ထိန်းမရတဲ့အတူ မျက်နှာလွှဲနေပုံရပါတယ်။
အလုပ်ရှင်ဆီရောက်ရင် အင်တာဗျူးဝင်ပေါ့။ တခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်နဲ့အဆင်ပြေတာ များပါတယ်။ သိပ်ခက်တဲ့ အလုပ်တွေမှ မဟုတ်တာလေ။ လုပ်ဖူးရင် လုပ်တတ်ရင် ရပါတယ်။ မရှိလည်း ရွှီးပေါ့။ မုသားမပါ လင်္ကာမချောဆိုတာ အဲဒီမှာသုံးတာပါ။ အတွေ့အကြုံမရှိလည်း စားပွဲထိုးအလုပ်ကို ခပ်တည်တည်နဲ့လျောက်၊ တပတ်လောက်နေတော့ပြုတ်၊ နောက်တဆိုင်ထပ်သွား၊ ထပ်ပြုတ်၊ နောက်ဆုံးဆိုင်ကြတော့ လုပ်ရင်းပြုတ်ရင်း ပြုတ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ တကယ်စားပွဲထိုး ဖြစ်သွားပါတယ်။ မဟုတ်ရဲသူကတော့ ပန်းကန်ဆေး၊ delivery man, စာပွဲထိုးအကူ bus boy ဘဝတွေနဲ့ အောက်ခြေရဲ့ အောက်ဆုံးက စပေါ့။ ဘတ်စ်ဘွိုင်ဆိုလို ရောက်ခါစက အူကြောင်ကြောင် အဖြစ်လေးတခုကို သတိရမိတယ်။ တနေ့အလုပ်သွားရှာတော့ လမ်းမှာဘော့စ်စတွန်တို့ ဖီလန်ဒါးဖီးယားတို့ကိုသွားတဲ့ တရုတ်ဘတ်စ်ကားကြီးတွေကို တွေ့ပါတယ်။ လမ်းမပေါ်ကားတွေရပ်၊ ဘေးမှာ စားပွဲခင်းပြီး လက်မှတ်ချက်ခြင်း ရောင်းတာပါ။ အခုတော့ ပေးမလုပ်တော့ဘူးထင်တယ်။ အေဂျင်စီရောက်တော့ ဘတ်စ်ဘွိုင်ဆိုတဲ့ အလုပ်ကိုတွေ့တော့ ဘတ်စ်ကားပေါ်လိုက်တဲ့ စပယ်ယာလို အလုပ်မျိုးထင်တာပါ။ နောက်မှ စားသောက်ဆိုင်မှာ စားပွဲထိုးခိုင်းတာလုပ်ရတဲ့ ပန်းကန်းချ ပန်းကန်သိမ်းလုပ်ရသူ မှန်းသိပါတယ်။ မသိခင်တော့ ဘယ့်နှယ် ဘတ်စ်ကားပေါ်လိုက်ရတဲ့ ဘတ်စ်ဘွိုင်၊ ဘတ်စ်ဂဲလ်အလုပ်တွေကို အေဂျင်စီတိုင်းမှာတွေ့တယ်၊ ဘတ်စ်ကားအမြဲစီးရတာ ကြာရှည်မလုပ်နိုင်ကြဘူးလို့ ထင်ခဲ့တာပါ။
အလုပ်မရရင် အေဂျင်စီပြန်သွား၊ နောက်တခုတောင်း၊ မရရင်စောင့်။ အင်တာဗျူး တခါသွားပြီးတိုင်း ကိုယ်ပေးထားတဲ့ ပိုက်ဆံထဲက ငါးဒေါ်လာဖြတ်ပါတယ်။ အလုပ်တခုမှမရပဲ ပိုက်ဆံကုန်သွားတယ်ဆိုတာ ဖြစ်ခဲပါတယ်။ ဖြစ်တတ်တာ တပတ်ကျော်ပြီးမှ အလုပ်ပြုတ်ရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်ထက်ကျော်သွားလို့ ပွဲခအသစ် ပြန်သွင်းရတာပါ။ စာထဲပါသလို တရုတ်အေဂျင်စီတွေက အခြားလူမျိုး အေးဂျင့်တွေထက်ဈေး တဝက်ကျော်လောက်သက်သာ၊ အာရှသားချင်းလည်းဖြစ်တာမို့ မြန်မာနဲ့ အေးရှန်းအများစုက သူတို့ဆီပဲ သွားပါတယ်။ လူရည်လည်သွားရင်တော့ ကိုရီးယားအေဂျင်စီများရှိပြီး ပွဲခကြေး ဒေါ်လာတရာကျော်လောက် ရှိတတ်ပါတယ်။ တရုတ်အေဂျင်စီတွေထက်သာပြီး အလုပ်ရှင်တွေက လူလည်းရွေးပါတယ်။ မူရင်းစာထဲမှာ တိဘက်နဲ့ မြန်မာလူမျိုး အလုပ်ရှာသူတွေအကြောင်း ရေးထားလို့ တရုတ်အေးဂျင့်များသတိပြုမိ၊ ဖောက်သည် အလုပ်ရှင်များ ကြိုက်တတ်တဲ့ လူမျိုးတွေလို့ ကြံဖန်ဂုဏ်ယူကြပါ။ သေချာတာတော့ မြန်မာ ဘားမားဆို သူတို့ သိပါတယ်။ သူတို့ရုံးခန်းနံရံတွေမှာ အလုပ်ရှာသူ လူမျိုးပေါင်းစုံရဲ့ ငွေစက္ကူတွေကို အလှပြကပ်ထားပါတယ်။
Winner အေဂျင်စီဆိုရင် မြန်မာများ မိန်မိန့်လို့သိကြပါတယ်။ ညီအမတွေဖွင့်တာပါ။ အခုတော့ အကုန်လုံးလင်ရလို့ သူတို့သားသမီးတွေတောင် ကိုယ့်ကိုကိုင်ပေါက်နိုင်တဲ့ အရွယ်တွေ ဖြစ်လောက်ပါပြီ၊ ကိုယ်ရှာတုန်းကတော့ အဆောက်ဦးတခုရဲ့ မြေအောက်ထပ် ရုံးခန်းလေးတွေရှိတဲ့ နေရာမှာပါ။ အပေါင်ဆိုင်လို သံစကာအပြင်ကနေ သူတို့ညီအမတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ညီမလုပ်သူ ယောက်ျားမရသေး ထင်ပါတယ်။ လာသူအများစုကလည်း အမျိုးသားတွေ၊ အလုပ်မပေါ်သေးရင် ကောင်တာအပြင်ဖက်မှာ ရုံးစုရုံးစု ဟေးလားဝါးလားနဲ့ဆိုတော့ မိန်မိန့်တို့လည်း အကြည့်ခံရတာ ရိုးနေပါပြီ။ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးမပျက်၊ မိတ်ကပ်ရိုက် မပျက်ပါဘူး။ တချို့လည်း ပွဲခပိုက်ဆံ မပေးသေးဘဲ မိန်မိန်ဆီပြေးလိုက် တီနာဆီပြေးလိုက် အခြားပြေးလိုက်နဲ့ စိတ်ကြိုက်မတွေ့မချင်း ဟိုဖက်ဒီဖက်လှည့် ရှာပါတယ်။ အလုပ်ကောင်းရချင်ရင် အေဂျင်စီရုံးခန်း ဖွင့်စအချိန် သွားပါ။ မဟုတ်ရင် တက်လာတဲ့ အကောင်းတွေကို စောစောရောက်သူများ ဦးသွားပြီး နောက်ကျသူများက အကျန်များကို ရလေ့ရှိပါတယ်။
အေဂျင်စီမှာ ရှိတဲ့အလုပ်များက အခွန်ရှောင်လို့ရတဲ့ cash နဲ့ပေးပါတယ်။ ဒီတော့ အလုပ်လုပ်ခွင့် ရှိရှိမရှိရှိ ပြသနာမရှိပါဘူး။ ကိုယ်လုပ်တတ် လုပ်ချင်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ အခုတော့ ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြနေတဲ့ မြို့တော်အစိုးရက ကြပ်မတ်လာတာမို့ စားသောက်ဆိုင်အတော်များများမှာ အလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိရင် လုပ်လုပ်မရ။ အခွန်မဆောင်ဘဲ နေလို့မရလို့ ပြောသံကြားပါတယ်။ အခြားလုပ်ငန်းလေးများကတော့ ငွေသားနဲ့ပေးဆဲမို့ စာရွက်မရှိသူများလည်း လုပ်နေကြဆဲပါ။ ပြောရရင်တော့ အစုံပါပဲ။ တခါတော့ ရှောင်လင်ဘုန်းကြီးဝတ်စုံနဲ့ တရုတ်ကိုရင်လေးတပါး အလုပ်လာရှာတယ်။ အချိန်ပိုင်းလုပ်ချင်လို့တဲ့၊ အေဂျင်စီကလူတွေလဲ စိတ်အတော် ညစ်သွားပုံရတယ်။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေနေသူများထဲမှာ သူတို့လက်ထွက်တွေ အများအပြားပါ။ ဒါကြောင့် မိုင်တထောင်ခရီးကို ခြေလှမ်းတလှမ်းကစရသလို အိမ်၊ကား၊ အလုပ်ကောင်းတခုနဲ့ မိသားစုတို့ဆိုတဲ့ American Dream ကိုမက်နိုင်ဖို့ တရုတ်တန်းကနေ မျှော်လင့်ချက်သစ်ဘဝခရီးကို ဖြတ်သန်းသူများအားလုံးကို ရည်မှန်းချက် ဆန္ဒကိုယ်စီပြည့်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း ဒီနေရာကနေ ဦးညွှတ်ဂုဏ်ပြု လိုက်ပါတယ်။
A version of this article appeared in print on February 23, 2011, on page A19 of the New York edition.
ဘာမှ မတွေ့ ရဘူး
ချောတီးဗျို့ ပုံထည့်တာ မပီပြင်လို့ စာတွေပါမပေါ်သွားတာ တောင်ပန်းပါတယ်။
အလုပ်တစ်ခုကို ရဖို့မရဖို့က မသေချာဘူး။ ပွဲစားက စားလိုက်ပြီပေါ့။ ဒါရှိသင့်သလား ဖြစ်သင့်သလား ဒီတစ်ညစဉ်းစားကြည့်ဦးမယ် နောက်နေ့မှဆက်ပြောမယ်နော်
မြန်မာစကားလုံးမှာ ..ပွဲစားက ရှေးကတော့ ..ပွဲစားကြီး ဆိုတာမျိုးက… အထက်တန်းစားထဲမှာပါတယ်..။
နောက်တော့..ဒီခေတ်မှာ ပွဲစားဆိုတာ.. နှိမ်တဲ့သဘော သက်ရောက်နေတယ်ထင်မိပါတယ်..။
ကိုနေ အလုပ်ရှာရင်..ပွဲစားနဲ့ရှာကြည့်. သက်သာပြီး…လွယ်မှန်းသိလိမ့်မယ်..။
များမကြမီ ဗမာကွလို့ ကမ္ဘာမှာ မော်ကြွားလာနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါကြောင်း။